Simyo သည်ယခုတွင်သင့်အားစမတ်ဖုန်းများရောင်းပြီးသင့်အားကိုက်ညီရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည် Androidsis
Francisco Ruiz | | မိုဘိုင်း, တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ
Simyo သည်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအော်ပရေတာဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူပေါင်း ၈၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အချို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောနှုန်းထားများ၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ချင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်တယ်လီဖုန်းနှင့်ဒေတာနှုန်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဖန်တီးခြင်းနှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် chicle တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ။
ပြီးတော့ Simyo မှာဘက်စုံသုံးမှုပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေရှိတာကြောင့်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နှုန်းပေါင်းစပ်စက်ကြောင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောရှာဖွေမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုဆိုပါကငါတို့သည်လည်းထည့်ပါ ငါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကဲ့သို့ကျော်ကြားသောစမတ်ဖုန်းများရရှိမှုဖြစ်နိုင်ခြေ, လျှော့စျေးနှင့်အဆင်ပြေသင့်ရဲ့ကန်ထရိုက်တာနှုန်းထား၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူအဆင်ပြေထည့်သွင်း, ငါတို့သံသယမရှိဘဲလာမယ့်လများအတွင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်အများကြီးပေးမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်အချိန်အခါသမယမဟုတ်။
ဤ စမတ်ဖုန်းများအရောင်းအ ၀ ယ် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းငါပြမယ်။ လိမ္မော်ရောင်ကုမ္ပဏီမှတဆင့်တယ်လီဖုန်းနှင့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဖောက်သည်အသစ်များနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်ရရှိနိုင်သည်.
1 စမတ်ဖုန်းသည် La Simyo ကိုကမ်းလှမ်းသည်
1.1 Alcatel ပေါ့ပ် 4
1.3 ဟွာဝေး P10
1.4 Huawei က P10 Lite ကို
စမတ်ဖုန်းသည် La Simyo ကိုကမ်းလှမ်းသည်
Alcatel ပေါ့ပ် 4
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် Alcatel Pop4ကိုဝယ်ပါသင်၌ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုက Simyo ကမ်းလှမ်းမှုရဲ့ ၇၉ ယူရိုကိုတစ်ခေါက်ပေးရပြီးမင်းကအမြဲတမ်းသင့်အတွက်ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ ငွေပေးချေမှု ၇ ယူရိုနှင့် ၂၄ လအတွက်တစ်လလျှင် ၃ ယူရိုကိုပေးချေ
ဤနေရာတွင် နှိပ်၍ ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုရယူပါ
သငျသညျလိုလျှင် ဒီ Alcatel Pixi 4G ကိုဝယ်ပါ သင်သည် Simyo တွင် ၉၉ ယူရိုကိုတစ်ကြိမ်သာပေးချေရမည် ကန ဦး ကြေးအဖြစ်ယူရို ၃ ဒေါ်လာနှင့် ၂၄ လအတွက်တစ်လလျှင် ၄ ယူရိုဖြစ်သည်.
ပြီးသားမြင့်အကွာအဝေးအတွင်းကျနော်တို့တစ်ခုလုံးရှိသည် တစ်ခုတည်းပေးချေမှုအတွက်ယူရို ၄၇၉ အတွက်သီးသန့် Simyo ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည့် Huawei P10 သို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်းဖြင့်ငွေကြေးရွေးချယ် ကန ဦး ငွေပေးချေမှု ၁၅၅ ယူရိုနှင့်တစ်လလျှင် ၁၃.၅၅ ယူနစ် ၂၄ အရစ်ကျပေးရမည်.
Huawei က P10 Lite ကို
Huawei ၏ Lite မော်ဒယ်သည်ထူးခြားသည် Huawei P10 Lite, Simyo ရှိတစ် ဦး အဘို့အရောင်းချကြောင်း terminal တစ်ခု ၂၆၉ ယူရိုတစ်ကြိမ်ပေးချေမှု, (သို့) ၂၄ လအတွက်တစ်လလျှင် ၈.၅ ယူရို ၆၅ ယူရို ၂၄ လလျှင်ပေးချေရမည်.
မင်းရဲ့အက်ပလီကေးရှင်းဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးကိုက်တဲ့ပန်းသီးဖြစ်ရင် Simyo သည် iPhone516 Gb အတွက်အထူးသီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုရှိသည် မှတဆင့်စျေးနှုန်းမှာပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု၏ သာ 289 ယူရို၏တစ်ခုတည်းငွေပေးချေသင့်တွင်အရစ်ကျငွေပေးချေမှုစနစ်ရှိသော်လည်း၊ ကန ဦး ငွေပေးချေမှုကို ၇၃ ယူနစ်နှင့် ၂၄ လအတွက်တစ်လလျှင် ၉ ယူရိုဖြစ်သည် သင့်ရဲ့လစဉ် Simyo ဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေမှုတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
သင်ရှာဖွေလျှင်, ထိုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ သင်သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်အစားသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိခြင်းတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအရှိဆုံးသောကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်သင်သည် Simyo ဖောက်သည်ဖြစ်ပြီးပြီ Simyo မိုဘိုင်းနှုန်းထားများ.
အကယ်။ ယခုငါတို့ဤအရာအလုံးစုံကိုထည့်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်တယ်လီဖုန်းငွေစာရင်းသို့ငွေကြေးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်စမတ်ဖုန်းများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည် သို့မဟုတ်အလွန်တင်းကျပ်စွာတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါး၏အစပိုင်းတွင်ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်းလာမည့်လများအတွင်းကုမ္ပဏီများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်စပိန်ပိုင်နက်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Movistar, Orange သို့မဟုတ် Vodafone ကဲ့သို့သောကဏ္ classic ၏ဂန္ထ ၀ င်ကုမ္ပဏီကြီးများအကြားတွင်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နိုင်ခဲ့လျှင်၎င်းမှာတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူ ၈၀၀၀၀၀ ထက်မနည်းပါ။ Simyo လေယာဉ်သည်စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အကွာအဝေးအားလုံးတွင်ဤကမ်းလှမ်းချက်အသစ်များနှင့်မည်မျှဝေးဝေးသွားမည်နည်း။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ » Simyo, ယခုသင်၌ရောင်းရန်စမတ်ဖုန်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သင်နှင့်ကိုက်ညီရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့
Galaxy J7 2016, သင်စျေးပေါသော Samsung ကို ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားနေလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်များအပေါ် အခြေခံ၍ Android ဂိမ်း ၅ ခု